Maxaad kala socotaa waxyaabaha kuxeeran shaqa ka erinta Agaasimihii FBI? | dhanaanmedia.com
May 10, 2017 // admin1 // Media News, News5809 Views
Madaxweyne Donald Trump ayaa shaqadii ka eryay agaasimihii hay’ada dambi baadhista Mareykana(FBI) James Comey.Trump ayaa erinta James Comey usababeeyay laba arimood oo kala ah inuusan si fiican umaamulin baadhistii kiiskii e-mailada Hillary Clinton iyo inuusan hogaamin karin FBI.
Erinta Agaasimaha FBI oo la dhaliilay
James Comey ayaa gacanta kuhayay baadhitaan la xidhiidha suurtagalnimada in Ruushku xidhiidh la yeeshay xubno kamid ahaa ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.Durbaba waxaa soo baxaya shaki laga muujinayo waxa isku soo aadiyay baadhitaankii oo gebagaba maraya iyo erinta agaasimaha.Waxaa la hadalhayaa suurtagalnimada in erinta agaasimaha lagu doonayo in wax lagu maldaho laguna carqaladeeyo natiijada baadhitaanka socda.
Maxaa ku qoran waraaqda erinta Agaasimaha?
Madaxweyne Trump ayaa waxyaabo lala yaabo ku qoray waraaqda erinta agaasimaha.Trump arimo shakhsi ah oo dhexmaray isaga iyo agaasimaha ayuu waraaqda ku qoray.Wuxuu yidhi sida tan:-
“Inkastoon la maqsuuday in sadax jeer oo kala duwan aad itidhi baadhitaan kuguma socdo,hadana waxaan ku raacsanahay soo jeedinta wasaarada cadaalada ee ah inaadan si wanaagsan usii hogaamin karin hay’ada FBI,” ayuu Trump ku yidhi waraaqda.
Ma laga yaabaa in arintani noqoto fadeexadii watergate oo kale?
Maxay ahayd fadeexadii watergate? Bishii June 1972-dii Mareykanka waxaa ka dhacday fadeexad mahadho noqotay oo galaafatay shaqadii Richard Nixon oo ahaa madaxweynihii xiligaa jiray.Shan nin ayaa la qabtay iyagoo jabsaday xafiiskii Guddiga xisbiga Democrat(DNC) iyo hoteel weyn oo kuyaala Washington islamarkaana ku guda jira inay ku talaalaan makarafoono si ay udhagaystaan dadka xafiiska ka shaqeeya iyo kuwa hotelka kushira.Baadhitaankii raggan lagu sameeyay waxay lugaha la gashay taageerayaashii madaxweyne Nixon.Madaxweyne Richard Nixon oo ka walwalsan natiijada baadhitaanka ayaa wuxuu habeen sabti ah shaqadii ka eryay baadhihii gacanta kuhaya kiiska.Natiijadii baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in madaxweyne Nixon bixiyay amarka lagu jabsaday xafiiska waxayna arintan horseeday in Nixon ku dhawaaqo iscasilaad.
Xagee iska shabahaan fadeexadii Watergate iyo erinta Trump uu eryay agaasimihii FBI?
Madaxweyne Richard Nixon wuxuu 1973-dii eryay baadhihii gacanta kuhayay xafiiskii la jabsaday iyo iskudaygii xigay ee lagu doonayay in arintaas lagu daboolo.Madaxweyne Trump wuxuu shaqadii ka eryay agaasimihii FBI oo gacanta kuhayay baadhitaan la xidhiidha suurtagalnimada in Ruushku xidhiidh la yeeshay xubno kamid ahaa ololihii doorashada ee madaxweyne Trump.
Majiro madaxweyne Mareykan ah oo iscasilay tan iyo iscasilidii madaxweyne Richard Nixon 1973-dii,su’aasha la isweydiinayo ayaa ah madaxweyne Trump ma noqon doonaa madaxweynihii xigay ee fadeexad dhacday darteed isucasila?
Xuquuqda daabicida waraaqda Trump waxaa leh AFP.